Dhageyso Qaar kamid ah Ganacsatada ku nool Magaalada Baydhabo Oo ka hadlay saameynta uu ku yeeshay Covid19 ee Ganacsiga yar yar. | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso Qaar kamid ah Ganacsatada ku nool Magaalada Baydhabo Oo ka hadlay...
Dhageyso Qaar kamid ah Ganacsatada ku nool Magaalada Baydhabo Oo ka hadlay saameynta uu ku yeeshay Covid19 ee Ganacsiga yar yar.
Ganacsiyada degmada baydhabo ee xaruunta gobolka baay ayaa maalinba maalintii ka dambeysa waxey yihin kuwo soo kordhaya taasi oo keentey in qaar ka mid ah xafadaha degmada ay yeelato suuqya yar yar oo laga hela adeegga nocyadiisa kala duwan .
Suuqa yaraha Xaafada Cadaada oo ku yaala bartamaha wadada isku xirta magalada muqdisho iyo baydhabo ayaa ah mid ay ka muuqato horumar ganacsi maadama ay bulshada qaarkeed ka furteen ganacsiyo kala duwan sida goobaha lagu dhaqo baabuurta Maqaayadaha dukaamaha goobaha lagu gado dalaqyada ka soo go,a dalka gudihiisa oo ay ka mid tahay misagada digirta lowska sisinta iyo waxyaabo kale.
Previous articleAskari ka tirsan Ciidanka dowladda oo darawal ku dilay Muqdisho
Next articleDhageyso Maamulka Degmada Berdaale ee Gobalka Baay oo dahafuray Xaruunta Hooyada iyo dhalaanka oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay degmadaasi